Horudhac: Barcelona vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka El Clasico ee galabta ka dhacaya garoonka Camp Nou) – Gool FM
Zidane oo cadeeyay in Real Madrid ay taageersan tahay, xilli uu shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aadan Ramos
RASMI: Bruno iyo Jack Grealish oo hoggaaminaya liiska musharaxiinta abaal-marinta xiddiga bisha November ee Premier League
RASMI: Mourinho iyo Moyes oo hoggaaminaya liiska musharaxiinta abaal-marinta macalinka bisha November ee Premier League
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Cadiz
Ed Woodward oo go’aamiyay mustaqbalka Ole Gunnar Solskjær ee kooxda Manchester United
Iker Casillas oo ka hadlay mustaqbalka Zidane iyo Ramos ee kooxda Real Madrid
Madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lionel Messi
Halyeey Arsenal ah oo kula taliyay Arteta inuu la soo saxiixdo xiddigg ka ciyaara Premier League
Sirta ka dambeysa bandhigiisa cajiibka ah ee Liverpool, xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Diogo Jota
Muxuu Mikel Arteta ka yiri ku soo laabashada taageerayaasha kooxda Arsenal ee taribuunka??
Horudhac: Barcelona vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka El Clasico ee galabta ka dhacaya garoonka Camp Nou)
Haaruun October 24, 2020
(Barcelona) 24 Okt 2020. Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa galabta oo Sabti ah qaadan doona kulankoodii ugu horreeyey El Clasico xilli ciyaareedkan 2020-21, waxaana labada kooxood ay doonayaan inay dib uga soo kabsadaan guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee soo gaaray horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa khasaaro 1-0 kala soo kulantay Getafe oo ay booqatay kulankeedii ugu dabeeyey horyaalka, halka kooxaha xafidanaysa horyaalka ee Madrid ay guuldarro lama filaan ay ku soo gaatay garoonkeeda kaddib markii ay soo dhoweeyeen kooxda ku cusub horyaalka ee Cadiz.
Taariikhda: Sabti 24 Okt 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 05:00 galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Juan Martinez (Spain)
Jordi Alba ayaa ka soo kabanaya dhaawac muruqa ah, laakiin waxaa lagu soo daray liiska xiddigaha kooxda Barcelona ee ka qeyb galeysa kulanka El Clasico ee maanta.
Junior Firpo ayaa taam buuxa ah kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawacii uu qabay, laakiin saxiixa cusub ee Sergino Dest ayaa la filayaa inuu sii wato ka ciyaarista daafaca bidix isbuucaan.
Layaab malahan wax laga filayo Ronald Koeman, inkastoo Ansu Fati iyo Philippe Coutinho ay tahay inay dib ugu soo laabtaan safka koowaad kaddib guuldarradii Barcelona ka soo gaartay Getafe.
Dani Carvajal ayaa maqan, halka Alvaro Odriozola isna uu shaki dhaawac ku jiro, taasoo la micno ah in Nacho la filayo inuu helo booska daafaca midig ee kooxda martida ah.
Ferland Mendy ayaa buuxiya booska daafaca midig mararka qaar, laakiin awooda daafaca reer France ayaa laga doorbidi karaa daafaca bidix ee Marcelo.
Vinicius Jr iyo Karim Benzema waa inay ku soo bilowdaan afka hore ee Los Blancos kaddib markii uu Zinedine Zidane isku dayay inuu nasiyo kulankii Shakhtar ee bartamihii isbuuca.
>- Kulanka maanta waa kii 182-aad ee horyaalka La Liga ku dhexmara labadan kooxood, Madrid ayaa guulo badan oo gaartay 73 guul, halka Barcelona ay badisay 72 kulan, waxaana 36 kulan ay ku dhammaadeen gar isku mid ah.
>- Isku soo wada duuboo, wuxuu noqon doonaa kulankii 245-aad ee u dhexeeya kooxaha waa weyn ee reer Spain, waxayna si la yaab leh u diiwaan geliyeen min 96 guul.
>- Real Madrid ayaa ku garaacin Barcelona garoonka Camp Nou kulan horyaalka ah tan iyo bishii April sanadkii 2016-kii,halka Barca markii ugu dambeysay ee ay garoonkeeda kulan horyaalka ah guul kaga gaartay Los Blancos ay ahayd bishii October ee sanadkii 2018-kii.
>- Barcelona ayaan la garaacin 32 ka mid ah 33-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaan dhankeeda la garaacin siddeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay horyaalka meel ka baxsan garoonkeeda.
Horudhac: West Ham vs Man City… (Sky Blue oo u safreysa London & Hammers oo doonaysa inay sii wadato guuldarro la’aanteeda xiriirka ah ee Premier League)
Horudhac: Man United vs Chelsea… (Red Devils oo 41-sano kaddib saddex kulan oo xiriir ah horyaalka lagu garaaci karo garoonkeeda)